သင်္ကြန်မှာအမိုက်ဆုံးမိတ်ကပ်စတိုင်နဲ့ အပြတ်လန်းနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ခြယ်သနည်းများ | CosmeticMyanmar
Home » Article » သင်္ကြန်မှာအမိုက်ဆုံးမိတ်ကပ်စတိုင်နဲ့ အပြတ်လန်းနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ခြယ်သနည်းများ
မကြာမီအချိန်အတွင်းမှာပဲ အတာသင်္ကြန်ရေသဘင်ပွဲတော်ကြီးကိုရောက်ရှိတော့မယ်နော်။ နှစ်ဟောင်းကနေနှစ်သစ်ကူးပြောင်းတဲ့ အချိန်သမယလဲဖြစ် တစ်နှစ်မှတစ်ခါပဲကျင်းပတဲ့ဒီလိုပွဲတော်ကြီးမှာအလန်းဆုံးဖက်ရှင်တွေ မိတ်ကပ်စတိုင်လ်တွေက အပြတ်မိုက်နေမှဖြစ်မှာပေါ့။ BFF တွေနဲ့မဏ္ဍပ်ထိုင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကားလေးနဲ့ပဲလည်လည်လူအများကြားမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေစေမယ့် မိတ်ကပ်စတိုင်လ်လေးတွေကိုမြန်မြန်လေးလက်တို့လိုက်တယ်နော်။✌?✌?✌?
??သင်္ကြန် Theme နဲ့လိုက်ဖက်မှုရှိအောင် ပြင်ဆင်ခြယ်သပါ။
အဝါရောင်ပိတောက်ပန်း၊ အလှဆင်ထားတဲ့အုန်းလက်တွေ၊ ငုဝါတွေကတော့ inspiration ယူသင့်တဲ့အဓိကအရောင်လေးတွေပါ။မည်းနက်အောင်ခြယ်သထားတဲ့ smokey look တွေ၊ အထူးသဖြင့်powder ကိုအခြေခံထားတဲ့ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေကိုရှောင်ရှားပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့powder တွေကရေထိလိုက်တာနဲ့ အလွယ်တကူပျက်သွားနိုင်ပါတယ်။ Cream အမျိုးအစားတွေ Waterproof ဖြစ်တာတွေကို အဓိကထားပြီးအသုံးပြုပေးပါ။ Highlighter ပြောင်ပြောင်လေးတွေကလဲ ရေစိုနေတဲ့ပျိုမေလေးတို့အလှကို ပံ့ပိုးပေးမှာပါနော်။
ရေတွေစိုလိုက်၊ နေပူထဲပြန်ထွက်လိုက်နဲ့ ပျိုမေတို့ အသားအရေတွေပျက်စီးကြမ်းတမ်းတာတွေမဖြစ်စေဖို့ နေရောင်ကာခရင်မ်ကို ၂နာရီခြားတစ်ခါလောက်ပြန်လိမ်းပေးပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ spray type sunscreen လေးတွေလည်းထွက်လာတာမို့အချိန်ကုန်သက်သာအဆင်ပြေသွားပြီလေ။ ပျိုမေတို့လိုက်ပြီးပြင်ဆင်နိုင်အောင်photo လေးတွေကိုပါ ထည့်ပေးလိုက်တယ်နော်။??
crazy lipstick color လေးတွေ
ဒီလို glow look လေးတွေ